किन खुलेन तातोपानी नाका ?
तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक)- भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले देशमा मानवीय संकट गहिरिन थाले पनि उत्तरी छिमेकी चीन तातोपानी नाका खोल्न उदासीन देखिएको छ।
किन भयो अख्तियारको निर्देशनमा वन्तको निलम्बन ?
काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फर्जी कम्पनीका नक्कली बिल-भर्पाई तयार गरी करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीमहानिरीक्षक कोषराज वन्तसहित चारजना सुरक्षा अधिकारीलाई निलम्बन गर्न बिहीबार सरकारलाई परिपत्र गरेको छ।
चीन भ्रमणमा ३० लाख खर्च, तर तेल आएन
काठमाडौं- चीनबाट तेल ल्याउने विषयमा सरकार र आयल निगमका गरी तीन प्रतिनिधिमण्डलले चीन भ्रमण गरेका छन् ।
२ घण्टामै पोखरा पुगिने विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन शुक्रबारबाट
काठमाडौँ, पुस २ । काठमाडौँ–पोखरा १७१ किमी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चीनको सरकारी कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आज उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग भेट गरी शुक्रबारदेखि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जानकारी गराएको हो ।
काठमाडौँ, पुस २ । चीन सरकारसँग इन्धन आयातलगायत अन्य व्यापारिक सम्झौता गर्न सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल यही पुस ८ गते त्यसतर्फ जान लागेको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि इन्धन आयात गर्ने विषयमा सरकारका विभिन्न निकायले चीनसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा जारी राखेको छलफललाई निष्कर्षमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल त्यसतर्फ जान लागेको हो ।
नवललाई विश्वकै ठुलो प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षक बन्ने अवसर
लण्डन । बेलायतमा बस्दै आएका स्पोर्टस् थेरापिस्ट नवल गुरुङले वर्ल्ड एथ्लेटिक्स् सेन्टरमा प्रशिक्षण गराउने अवसर पाएका छन् । विश्वका उत्कृष्ट एथ्लेटिक्स् खेलाडीहरुले प्रशिक्षण गर्ने सेन्टरमा नवलले ६ महिना खेल चिकित्शाको बारेमा खेलाडीसँग प्रत्यक्ष काम गर्नेछन् ।
करोडौं भ्रष्टाचारको अभियोगमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुखसहित चारलार्इ निलम्बनको सिफारिश
काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई करोडौ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै निलम्बन गरेको छ । अख्तियारले निलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई बिहिबार पत्र लेखी पठाएको छ ।
‘नयाँ गायकलाई धेरै चुनौती छ’
सबै पुराना र स्थापित गायकहरुले नयाँलाई माया मात्रै गर्दैनन् । कहिलेकाहीँ अपमान पनि खेप्नुपर्छ । सुरुमा त केही थाहा पनि हुँदैन । त्यही नयाँपनको फाइदा एल्वम कम्पनीहरुले पनि उठाउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको पीडा, 'नेपाल जान्छुभन्दा मारेर फालिदिन्छौँ भन्थे'
काठमाडौँ । तीन वर्ष छ महिना लेबनानमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्नुभएकी मकवानपुरकी शान्तिमाया तामाङले ११ महिनाको मात्र पारिश्रमिक पाउनुभयो । काम गरेको पूरा पारिश्रमिक पाउनुको सट्टा उहाँले मानसिक र शारीरिक यातना खेप्नुपर्यो ।
तेल हालेर मोटरसाइकल स्टार्ट गर्दा आगलागी
काँकडभिट्टा । झापाको बुधवारे–९ स्थित जनकल्याण शिव स्टोर्स (पेट्रोल पम्प)मा भरेको एउटा मोटरसाइकलमा आगलागी भएको छ । बुधबारे ट्राफिक प्रहरी बिटका इन्चार्ज जनक खड्काका अनुसार दिउँसो १:१५ बजेतिर पेट्रोल भरेको मे ५ प ३५६ नम्बरको मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर लैजान खोज्दा पम्पकै छेउमा अचानक आगो लागेको थियो ।
Page 3742 of 3756